Ndị 'ghost ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii na-eche': Martin Vrijland
'Ezinaụlọ' sitere na akụkọ Ruinerwold ga-echekwa Telegraaf ọtụtụ ego ma ọ bụrụ na ọ na-ere 'ndebanye aha ya'. Agbanyeghị, ọ bụrụ na imeghe ọgbaghara a 'ghost ezinụlọ' na ọnọdụ Google Chrome incognito, ị nwere ike gụọ akwụkwọ anaghị akwụ ụgwọ. Gini mere iji tinye akwụkwọ akụkọ nke kwadorolarị usoro ọchịchị Nazi na "40 /" 45 ma ka na-emetụta echiche nke ọtụtụ ndị taa? Ihe ole na ole ghọtara bụ na enwere ike iji mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịbanye n'ime iwu na-emetụta mmadụ niile site na arụmọrụ nke mmụọ (PsyOps). N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike jụọ onwe gị ihe kpatara steeti nwere ike ịnapụ mmadụ (mkporo) na nnwere onwe ha, maka oge a, ọ dị ka o nweghị ihe ọjọọ dị njọ.
E nwewo ogbugbu na Ruinerwold? Ahụla ozu ọ bụla n'ime ogige ahụ? Enwere AK47s n'ime okpuru ulo? Ọ dịghị nke ahụ! E nwere naanị otu akụkọ nwata nwoke na pọọsụ ma ndị nke fọdụrụ naanị ntule. Kedu otu ị ga - esi mepụta oke ọgba aghara dị otú a gburugburu mmadụ ole na ole nwere ubi a na - ekenye ya, nke akụkọ ya niile sitere na ụbọchị 1 dabere na ntule na ọ nweghị ihe ọ bụla mara mpụ amabughị.
Nwa nwoke nke 25 dị afọ na-a aụ bea ole na ole na ụlọ mmanya ma dịka ekwesịrị ịrịọ maka enyemaka. Enyemaka maka gịnị? Na nwoke na-ejide ya? Kedụ ka ọ ga-esi gaa ebe a na-a pubụ mmanya ma ọlị? Gịnịkwa ka nwoke ahụ nwere n'ebe ọ nọ? Ihe m na - ekwu bụ: yabụ ị na - atụgharị ndị Netherlands niile na - akọ akụkọ banyere ndị nwere ike ịnwe obere ndụ naanị na ebe a na - eke ubi, mana ị ga - atụ anya ga - eme ka ụdị mkparịta ụka a na - egbu egbu ma ọ bụ na akụkọ akụkọ a na - ejikwa Marc Dutroux nke metụtara ụmụaka. kpọchiri akpọchi. Egwu ọjọọ Robert M. na-elekọta ụlọ na nlekọta ndị Amsterdam mere ka isi akụkọ belata karịa akụkọ a na-akọkarị nkọ. Ọ bụrụ n’ịnụ ka ndị nta akụkọ na-ekwu, ọ nweghị ihe ọzọ karịa "anyị amabeghị","anyị ka na-eme nyocha nke ahụ"Na"enwere ike ichere na mgbe ọgwụgwụ","nna nwere ike bụrụ onye otu otu otu Ọnwa". Ha kachasị ma na-egwu egwu ọfụma, mana ọ bụrụ na inyocha ya site na nzọụkwụ, ị ga-achọpụta na enwere ụfọdụ nnwere onwe dị mkpa na mgbochi ahụ.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya itinye ọnụ PsyOp site na nkwadebe ọtụtụ afọ. N'ezie ọ bụrụ na ị na-eji ọnọdụ ebe ọnụọgụ mmadụ dị ntakịrị. Ọ bụrụ na ịchọrọ imejupụta mgbanwe mmebe iwu nke nwere mmetụta na nde mmadụ 17 ma nwee ike ịtọ ntọala maka iwu EU ọhụrụ nke na-emetụta nde mmadụ 500, ọ ga-efu ọnụ ọgụgụ ole na ole ma ịchọrọ ịme ọrụ nkwadebe zuru oke na ihe ndị mmadụ na-eme. ikwere. Ọzọkwa, anyị nwere ANPs John de Mol na ihe nkiri ya na nhọrọ nke deepfakes iwepụta akụkọ adịgboroja.
Site na ọdịnaya a kwụrụ ụgwọ, nke De Telegraaf na-egosi dị ka ọtụtụ ndị mmadụ, anyị nwere ike ịchọpụta n'ọnọdụ Incognito na enwere ozi doro anya n'azụ akụkọ a. N’ezie, e nwere nnabata dị ukwuu nke nwere ihe ndị a:
ndị na-akọ akwụkwọ nri nke ha nwere ike ị nwee ụkọ
ụmụ nwoke nwere afụ ọnụ na ogologo ntutu dị ize ndụ (dịka ọmụmaatụ, Martin Vrijland)
Ndị na-achọghị ịgbaso iwu steeti bụ ihe ize ndụ nye onwe ha na gburugburu ha
Ndi di nkpa bu ndi sectarian ma na-egbochi umu
Imirikiti PsyOps nwere ọtụtụ usoro dị iche iche, mana o doro anya na nke a bụ nnukwu ọmarịcha banyere nghọta ndị mmadụ. Ọ dị ka ndị ahụ ga-akwadorịrị maka iwu ga-eme ka steeti ahụ lee anya n'azụ ụzọ ọ bụla.
Ederede dị ka nke a ị ga-agụ ọ bụrụ na ị so na akwụkwọ akụkọ ahụ na ezigbo aha ọma a:
Jorit kwetara na ndị bi n'ugbo ahụ nwere echiche dị iche. Ezinaụlọ ndị Austrian na ndị Dutch ahụ achọpụtala ibe ha n'echiche ụfọdụ gbasara etu obodo kwesiri isi ele anya. "Josef abịawo America ma hụ otu ụlọ ọrụ na-achịkwa ịmị mkpụrụ. O chere na nke ahụ ezighi ezi. Gọọmenti ekwesighi ikpebi ihe ndị mmadụ riri ma ọ bụ dụọ. Ejiri mkpụrụ ndụ ihe nketa mee ka ọ dị ọcha. Ọ chọghị iri nke ahụ. ”
"Ọ chọrọ ilekọta mmiri nke ya na nri ya, maka na o chere na enwere kemịkal dị na ya. Ọ na-a waterụ mmiri a karama. Enwerekwa nsi na ụlọ ọrụ ikuku. Ha kwenyere na gọọmentị nke ike na-akwado ya. O kwuru na ọ baghị uru ịtụ votu. Na njedebe oge ekwenyeghi dịka m maara. Mana ọ chọrọ ichebe ụwa ya, ya mere na ọ nweghị onye chọrọ. Ọ chọrọ ime ka ugbo ahụ juju afọ. "
Iji malite, ndị a abụghị echiche dị iche. Anyị bụ onye akaebe na Neuro Linguistic Programming (NLP) dị ọcha nke ndị mmadụ. Site ugbu a gaa n'ihu na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ekpebi ihe 'iche iche'bụ. Ndị a bụ nzọụkwụ mbụ na-eduga na George Orwell's chere uwe ojii. Site ugbu a gaa n'ihu, steeti (site na mgbasa ozi mgbasa ozi ya) ga-ekpebi ihe ị nwere ike na-enweghị ike iche. Kemgbe ole ka ịgaghị achọta na otu ụlọ ọrụ na-achịkwa ịkọ ọka yana Monsanto (ugbu a Bayer) ji mkpụrụ osisi na-eme ihe ọkụkụ? Kemgbe ole mgbe ọ bụ ihe ihere ịgha ịkọ nke aka gị na ime ka mmiri dị ọcha? Ọ dị mma, nke ahụ bụ n'ezie site ugbu a gaa n'ihu! PsyOps na-emezu nzube a. Ndi mmadu emeela nke oma. Ọ bụ NLP nke mega hà na igwe mgbasa ozi mgbasa ozi gụnyere ndị ama ama nke "ndị ọkachamara" na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwe na-ebugharị ọzọ.
Ejiri ndi mmadu n’egosiputa n’onyinye na onye o bula nke na-eche echiche ike na-eme nzuzu na ndi otu. N’ezie, a na-egwuri egwu ebe a site na ijikọ ụdị nkatọ ọ bụla na ụdị ‘ụkọ’ na mmadụ na-apụnara ụmụaka nnwere onwe ha.
Oge eruola ị toụ sịga ndị mgbasa ozi PsyOp na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si n'ọgba ha! Ha na-ahụ maka igbu ikike gị bụ isi site na egwuregwu aghụghọ na mmemme. Na-agụ Lee ebe a.
Ruinerwold Drenthe na ezinụlọ ya, ọrụ mmụọ na-esote (PsyOp) kwupụta steeti ndị uwe ojii
Ozi dị oke mkpa maka ndụ gị ugbu a
Tags: 25, iche, oge njedebe, chere uwe ojii, ezinụlọ, echiche, afọ, mkpuchi, mpụ, Ọnwa, ozi ọma, echiche, adịchaghị, Ruinerwold, òtù, wepu, ndi igbo, telegraph, vader, nwa nwoke
18 October 2019 na 08: 29
Ọ bụ otu esi kọwaa!
Akụkọ a aghọọla akụkọ mba ụwa. Ma achọpụtara m na ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ya akụkọ na-edoghị anya, ma abanyekwala na ya miri emi.
Debe ya Martin, ihe a na-akpata buru ibu ma na-ebuwanye ibu. Nogha adịkwaghị achịkwa, eziokwu na-emeri mgbe niile.
18 October 2019 na 09: 56
Ihe kacha ju m anya bu ndi mmadu n’ehu ihe na - eme ma onweghi nsogbu ikwusi okwu di otu a ma obu dọọ ha aka na ntị gburugburu .. “n’ihi ụjọ nke ịbụ onye a jụrụ ajụ”. Olee ihe ka njọ ugbu a? Gburugburu ebe obibi na-enweghị nghọta n'ihi na mgbasa ozi mechiri anya ya ka ọ bụ ihe iyi egwu na-agaghị agbanwe agbanwe?
18 October 2019 na 20: 23
Nke ahụ metụtara mmepe nke onwe gị dị elu. Ọ bụrụ n’ịghọta ka ụwa a si arụ ọrụ n’ezie, mgbe ahụ ị chọghị ịma ịbụ onye a jụrụ ajụ. Na mgbakwunye, ọ na-adaberekwa n’otú i si weta ya na n’uche nnata ozi. Ọtụtụ mmadụ na-agụ ma na-ahụ ihe niile mana ọ naghị abaghị n'ihi na ha rọrọ nrọ.
Nnukwu ihe ịma aka anyị bụ ime ihe ụbọchị kwa ụbọchị na ịghara ijide akwụkwọ ụtụtụ na ememe ụbọchị ndị ọzọ na-anya ụgbọelu.
Ozugbo nke a mebiri emebi ọ na-aga ngwa ngwa na mmepe nke avatar anyị.
18 October 2019 na 10: 37
Ndị uwe ojii letara 1x n'ụlọ ahụ n'oge mbụ n'ihi na ha chere na enwere ike ịgba ahịhịa, ma nwoke ahụ ekweghị ka ha banye. (Nkwupụta ndị uwe ojii) kwuru na onye nchịkwa banyere nghọta Jeroen Pauw kwuru.
O doro anya na isi okwu a bụ ya mere iwepu mbata ahụ: Nsogbu, Mmeghachi omume, Ngwọta ... ọgụ
20 October 2019 na 00: 31
Na mmemme ụbụrụ ahụ (NPO) nke Pauw ahụ na-eme ka okwu na-agagharị agagharị, site na nke pastọ ahụ nwere ike ịda ụda karịa.
mkpụrụ obi nke duziri (ndị na-ekiri TV).
Na nkeji 21, 19 nyocha a (nke e chere na ọ ga-eme) na-ejedebe na Sjoukje Drenths- Bruinsma onye buuru ihe ederede ya: "Usoro nchịkwa mbibi ahụ dị, ọ na-agbagha ụbụrụ"
Nke ahụ kwuru na ụlọ ọrụ nchịkwa ụbụrụ kachasị na NL, Pauw ga-eme onwe gị ihere
mmadụ niile na-egwuri egwu ebe ahụ, kedu ka ị ka nwere ike ịga, Richard Groenendijk onye na-emekwa ka ọkụ dị elu site na ịrịọ site n'oge ebighi ebi (mụtara) site na mmetụta adịgboroja.
Ihe ihe onyonyo na-egosi iji mee ka ndị niile NLérs na-aga n’ụzọ ụfọdụ.
Richard groenendijk onye na-eme ihe nkiri nke nwere mmasị itinye onwe ya na aghụghọ nke ọha,
Ederede nke nwere ebumnuche ndị echebara echiche na ya na ọgụgụ isi nke mmụọ.
Ka anyị kelee onye na-ede blọgụ maka nyocha nghọta, ma ọ bụghị ya, ị ga - eme ọzọ, ihe adịgboroja nke ugbo na Drente.
18 October 2019 na 15: 33
Dika ukwe ndi Welsh abuo abuo
Y’oburu n’inwee ihe a umu gi gha abia ozo ..
18 October 2019 na 15: 48
“Ee, mana Jeroen Pauw dị m ka ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ; ọ naghị agha ụgha? Onye dị otu a anaghị egwuri egwu, ọ bụ ya? Ọ bụghịkwa ndị ọbịa niile nọ na tebụl ahụ? "
Pnye na-akwụ ụgwọ ikpebi.
18 October 2019 na 16: 07
De Mol na Pauw maara ibe ha ruo na nke mbụ onye ya na-anọdụ ala na tebụl. Echetere m n’okpuru nrụgide sitere n’aka Queen ka a na-anụ mgbe niile na mbido ihe ngosi ya. Amaghị ma ọ bụrụ na nke ahụ ka bụ ikpe, mana ọ dị mkpa ..
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mfu karịa 2013. Ikekwe nke ahụ metụtara mmasị ya nke ihe karịrị 25 pasent na TVBV, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke Endemol nwere pasent 71. Equha nhatanha nke ụlọ ọrụ ya Pief Paf Pauw belatara site na € 4,1 nde rue € 2,6
Ọ nọ n'akpa De Mol (Talpa)
19 October 2019 na 19: 53
Na profaịlụ facebook nke nwa okorobịa ahụ. Guzoro ‘eziokwu’ ole na ole, dị ka ụbọchị ọmụmụ na ụbọchị ibughari, iji mee ka ekwenyesu. Otutu ihe edeputara ma obu ndi si na ndi mmadu le anya ihe ngosi a bu ihe o kwuru. Ọ na-ekwu na ọ bụ otu enyi si America mere foto ya. Ya mere amabeghị ebe ọ ga-eme ya na onye m ga-eme ya.
" Ndị ọrụ ugbo na-eme ngagharị iwe: ndị ọrụ ugbo na-elebara anya na ndị isi ngagharị iwe gị abụghị ndị ọrụ mkpuchi steeti
Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2) »
Nleta nile: 13.857.454
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? op Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
guppy op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
SandinG op Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya